Imibuzo evame ukubuzwa - Hangzhou Precision Machinery Co., Ltd.
Ingabe umkhiqizo owenziwe ngezifiso uyatholakala?
Yebo, sitshele nje izicelo zakho, singakwenza ngezifiso kuwe.Futhi kungathuthukisa uhlelo lwakho.
Ngabe ngikhokha imali eyengeziwe eyenziwe ngokwezifiso?
Kuya ngokuthi uma ufuna nje ukushintsha njengamandla kagesi, usayizi wephenyo, i-flange njll kukhululekile. Uma ufuna ukushintsha ingxenye esemqoka, noma ungeze izinsiza ezisekelayo, umugqa womhlangano, njll. Singaxoxa ngezimali ezihambisanayo.
Ngabe ngidinga ukushintsha umugqa wami osebenzayo wamanje lapho ngisebenzisa umkhiqizo wakho?
Cha, sizokhetha futhi sihlele umkhiqizo ngokuya ngentambo yakho yokusebenza yamanje.
Ngingathola isampula ngaphambi kwe-oda?
Impela, amasampula akhokhelwayo ayatholakala. Ungaqasha imishini yelebhu yezinga lelebhu kuqala ukuhlola ikhwalithi nokusebenza komphumela. Uma ihlangabezana nezidingo zakho, ungathenga izinga lezimboni ngaleso sikhathi, futhi imali yokuqasha ingasetshenziswa njengokukhokhwa kwezimpahla.
Ngemuva koku-oda noma ukuqasha isampula, ukuzama kanjani kunengqondo kakhulu?
Ngaphambi kokusebenzisa okokusebenza, sizocela izidingo zakho bese uphendula.
Ngemuva kokusebenzisa idivayisi, sizonikezela ngezinyathelo ezihambisanayo zokuhlola kanye nencwajana yemishini.
Uma ukuhlolwa sekuqediwe, sizokusiza ukukhipha amarekhodi afanele wedatha.
Imboni yethu inomlando weminyaka ecishe ibe ngu-30 kusukela yasungulwa.Inezinduku ezingaba yikhulu eziyi-100 kanye nabasebenzi abangaphezu kwe-15 be-R & D abasebenza e-Hangzhou, bamukelekile kakhulu ukuvakashela nokuxoxa.
Ukukhokha & Ukulethwa & Iwaranti?
T / T, L / C lapho ubona, i-Western Union, i-PayPal, i-Visa, i-Master Card.
Phakathi nezinsuku zokusebenza eziyi-7 zomkhiqizo ojwayelekile, izinsuku zokusebenza ezingama-20 zenzelwe eyodwa.
Umkhiqizo ngamunye ngaphandle kokuthengiswayo unewaranti yeminyaka emibili.
Ngabe wenza kuphela futhi uthengise imishini ye-ultrasonic?
Singumkhiqizi ogxile ekukhiqizeni imishini ye-ultrasonic kanye nezixazululo zezimboni zemishini ye-ultrasonic. Asigcini ngokuhlinzeka ngemishini ye-ultrasonic, kepha futhi neminye imishini ehlobene esetshenziselwa ukukhiqizwa kwezimboni. Isibonelo, i-blender. Itanki lokuxuba lensimbi engagqwali, imishini yokwelashwa kwamanzi, ithangi lokuhlola ingilazi, izesekeli zikagesi nokunye.
Ngingaba ngumhambisi wakho?
Vele samukelekile kakhulu. Sidinga abathengisi abakhuthele kakhulu ukujoyina nathi ukukhuthaza umkhiqizo wethu futhi sandise ukungena ezimakethe eziningi. Ikhwalithi kuqala.
Iziphi izitifiketi onazo?
Okwasefekthri, sine-ISO; Ngemikhiqizo, sine-CE. Ngohlelo Lokusebenza, sine-Patent kazwelonke.
Yini inqubekela phambili yakho?
Singumkhiqizi wokuqala wemishini ye-ultrasonic eChina. Okokusebenza okuyisisekelo kunokwethenjelwa ngekhwalithi futhi kuqinile ku-R & D.
Ngaphambi kwe-oda: ukuthengiswa kweminyaka eyi-10 neminyaka engama-30 onjiniyela banikeza izeluleko zochwepheshe ngomkhiqizo, ake uthole izimpahla ezifanele kakhulu.
Ngesikhathi se-oda: Ukusebenza kobungcweti. Noma iyiphi intuthuko izokwazisa.
Ngemuva kwe-oda: iminyaka emi-2 yesiqinisekiso, ukwesekwa kwezobuchwepheshe besikhathi sokuphila.